I-china 3003 5052 iAluminiyam yedayimani yokunyathela ipleyiti yoMvelisi kunye noMthengisi | URuiyi
Ipleyiti yedayimane, ekwabizwa ngokuba yipleyiti yokujonga, ipleyiti yokunyathela kunye nembasa yomgangatho weDurbar, luhlobo lwesitokhwe sesinyithi esineendlela eziqhelekileyo zedayimani okanye imigca kwelinye icala, icala elingasemva lingenanto. Ipleyiti yedayimane ihlala iyintsimbi, intsimbi engenasici okanye ialuminium.
Iimpawu zePlati yokujonga iAluminiyam (Ipleyiti yokujonga iAluminiyam, ipleyiti yeAluminiyam)
Ingxubevange / iBakala AA3003
Ubushushu / Ukuqina O, H14, H16, H18, H24, H26
MOQ 6MT kubungakanani nganye
Uluhlu lweCold Rolling
Ubukhulu (mm) 0.28-6.00mm
Ububanzi (mm) 800-2000mm
Ubude (mm) 800-8000mm
Idayimani yeplayimani yokunyathela ipleyiti okanye ipleyiti yomgangatho isetyenziswa ngokubanzi kwizicelo ezahlukeneyo zokwakha, zokwakha kunye nezokuthambisa. Indlela sele iqulunqiwe yokuqengqa iipleyiti zesinyithi ngephethini "ye-lug" ephakanyisiweyo, enika umthengi ukhetho oluninzi lokuhlangabezana neemfuno zeprojekthi, eneempawu ezithile zokucoceka, ukumelana nefuthe, amandla enkxaso kunye nokumelana nomhlwa
Plate yeTayitile yokuHamba i-3003 H22 -Le nto ineempawu ezifanayo njenge-3003 aluminium esemgangathweni kunye nepatheni yokunyathela okuphuculweyo yokuphucula ukubamba. Oku kuqheleke kakhulu kusetyenziswa iibhokisi zezixhobo, iiphaneli zodonga, ukutyibilika, iilitha zebhedi yeloli kunye nokunxitywa, igaraji kunye nokunxitywa kweeworkshop, iipleyiti zamanyathelo kunye nasiphi na esinye isicelo esidinga ubunzima bokukhanya kunye namandla e-aluminium engama-3003 ngokunyuka kwendlela yokunyathela.
Iphepha lokunyathela iphepha leAluminiyam, IAluminiyam inyathela ipleyiti yeBrite, Abenzi beplate yokujonga iAluminiyam, abenzi bephepha lealuminium eTshayina, abavelisi bephepha leDayimani, abavelisi beplate yeAluminiyam
3000 uthotho lwealuminiyam yialuminium manganese ingxubevange, kunye nokwakheka kwayo kweemanganese malunga ne-1.0-1.5%. I-Aluminium 3000 uthotho yeyona nto inento yokulwa nerusi. Ke, olu hlobo lweealuminium eziqhelekileyo ziqhelekileyo zisetyenziswa kwimoya, ifriji, ezantsi emotweni nakwezinye iindawo ezifumileyo. Ixabiso layo liphezulu kune-1000 series aluminium. Ngaphezu, 3000 uthotho aluminiyam ayikwazi ukunyangwa ubushushu nokomelezwa, kodwa kungomelezwa yinkqubo ebandayo wokugaya ingqolowa.
Iimveliso ezimele ezi zinto ziingxube zealuminium zi-3003, 3A21, 3004, 3015 njalo njalo. I-aluminium alloy 3003 ineplastikhi ephezulu kunye ne-weldability efanelekileyo. I-aluminium engama-3003 ingasetyenziselwa ukwenza izinto ezingamanzi ezahlukeneyo okanye izikhongozeli zegesi, ezinjengeetanki zeoyile, ipetroli okanye imibhobho yokuthambisa ioyile njalo njalo.
IAluminiyam 3000 yenye yeemveliso ezishushu zokuthengisa zeshishini le-RUIYI Aluminium. Phakathi kwezinto ezininzi zealuminium eziqhelekileyo, iRUIYI Aluminium inokubonelela ngomgangatho ophezulu kunye nohlobo oluninzi lweemveliso zealuminium ezingama-3003, ukunceda ishishini lakho.
Plate ye-3003 yeAluminiyam yedayimani
Ubushushu: H16, H18
Umbala: RAL Umbala, isilivere, igolide, iBronzi, Mnyama, Pinki, Bomvu, luhlaza, umbala wesinyithi
Ibrashiji: Icala eliphindwe kabini ligqityiwe
Ingqolowa engaphezulu: iinkozo ezichanekileyo, iinkozo zaseNakanaga, iinkozo ezimfutshane, ukutya okuziinkozo
Ukukhuselwa komphezulu: ngefilimu okanye hayi, ngokweemfuno zakho
Iinkcukacha zokuhanjiswa: malunga neentsuku ezili-15 emva kokufumana idiphozithi
Qaphela: Ubomi beShelfu yobomi bokukhusela ngaphezulu ziinyanga ezi-6, idiphozithi, iimfuno zesitokhwe: zomile kwaye zinomoya, zithintela ubushushu kunye nelanga elithe ngqo. Ukuba kubushushu obuphezulu, ukukhanya kwelanga-indawo engenanto, iya kuba yintsalela okanye ingakwazi ukukrazula ukongeza kwimeko leyo
1. Range hood kunye neflue turbine yegesi
3. Isifudumezi samanzi kunye nekhalori
4. Tshintshela kwaye ucime
5. Izixhobo ze-elektroniki
6. Izibane nezibane
7. Iphaneli edibeneyo yeAluminiyam
8. Izixhobo zasendlini nezasekhaya
9. Iqokobhe lefowuni ephathekayo
10. Isakhelo seAluminiyam
12. Ibhodi elaminethiweyo
13. Isayini kunye negama leplate
14. Impahla, amatyala kunye neesutikheyisi
15. Isitya sokuqinisekisa umlilo
16. Iphaneli yekhompyutha
1. Isinyithi esomeleleyo, umbala otyebileyo, onemfashini kunye nophakamileyo
2. Ngaba ngqo bexhentsa bokwakha, kwaye iindawo ezigoba ukumelana kuqhume
3. Ukuqina kwempahla etshabalalisayo, ukunganyangeki ekuqaleni
4. Umbane we-anti-static, akukho mnqweno, kulula ukucoceka
Egqithileyo I-1050 1060 1100 iAluminiyam Sheet Sheet
Okulandelayo: Iphepha leAluminiyam engama-6061-T651
Diamond Nyathela Umzekelo Slip-Resistant Aluminium S ...
Zintle Rust Resistance Aluminium Checkered Pl ...